N'ogbe Tec mgbe nile modul Series – oyi Nrụpụta na Factory |Aurin
A na-eji modul mgbe niile maka ngwa nke chọrọ okpomọkụ maka ebumnuche jụrụ oyi dị ka obere ngwa nju oyi, ihe na-enye mmiri, ngwa mma wdg.Aurin na-enye ọtụtụ ụdị thermoelectric ọkọlọtọ maka ịme ka oyi, ịgba ígwè ọkụ na ngwa njikwa okpomọkụ ziri ezi.Ọtụtụ modul ọkọlọtọ dabere na usoro TEC nke modul thermoelectric.Usoro TEC na-enye ọrụ okpomọkụ dị elu ọ nwere ike ịrụ ọrụ na okpomọkụ ruo 135 Celsius maka ọrụ nkịtị, yana 200 ° C maka obere oge.Ọ bụ igwe ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma, enwere ike iji ya na ngwa ịgba ígwè na-ekpo ọkụ.
A na-eji modul mgbe niile maka ngwa nke chọrọ okpomọkụ maka ebumnuche jụrụ oyi dị ka mini-fridge, ihe na-enye mmiri, ngwa mma wdg.
Ndepụta Modul mgbe niile
Ọ bụrụ na nkọwapụta gị anọghị na listi, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.Ogo ahaziri nha dị.
1. Kpebie ọnọdụ ọrụ nke mpempe akwụkwọ jụrụ oyi nke semiconductor.Dị ka ntụziaka na nha nke ugbu a na-arụ ọrụ, a pụrụ ikpebi refrigeration, kpo oku na okpomọkụ na-arụ ọrụ mgbe niile nke mpempe akwụkwọ refrigeration semiconductor.Ọ bụ ezie na a na-ejikarị ọnọdụ refrigeration eme ihe, a ghaghị ileghara ikpo ọkụ ya na arụ ọrụ okpomọkụ mgbe niile.
2. Kpebie ezigbo okpomọkụ nke njedebe na-ekpo ọkụ n'oge refrigeration.Iji nweta mmetụta dị jụụ, a ghaghị ịwụnye mpempe akwụkwọ semiconductor na radiator dị mma.A na-ekpebi ezigbo okpomọkụ nke njedebe na-ekpo ọkụ nke akwụkwọ oyi na-ekpo ọkụ nke semiconductor n'oge refrigeration dị ka ọnọdụ ikpo ọkụ ọkụ si dị.Ọ ga-kwuru na n'ihi mmetụta nke okpomọkụ gradient, n'ezie okpomọkụ nke na-ekpo ọkụ ọgwụgwụ nke semiconductor jụrụ oyi akwụkwọ bụ mgbe niile elu karịa elu okpomọkụ nke radiator, na-emekarị ihe na-erughị ole na ole ụzọ iri nke a ogo, Ọtụtụ n'ime ha bụ. ọtụtụ ogo dị elu ma ọ bụ karịa ogo iri dị elu.N'otu aka ahụ, na mgbakwunye na gradient na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na njedebe na-ekpo ọkụ, a na-enwekwa gradient okpomọkụ n'etiti oghere dị jụụ na njedebe oyi nke semiconductor jụrụ oyi.
3. Kpebie ebe ọrụ na ikuku nke mpempe akwụkwọ refrigeration semiconductor.Nke a na-agụnye ma ọ na-arụ ọrụ na agụụ ma ọ bụ na ikuku nkịtị, nitrogen akọrọ, static ma ọ bụ na-erute ikuku na ọnọdụ okpomọkụ, iji tụlee ihe mkpuchi okpomọkụ ma chọpụta mmetụta nke ntanye okpomọkụ.
4. Kpebisie ike na ihe na-arụ ọrụ na thermal ibu nke semiconductor jụrụ oyi akwụkwọ.Na mgbakwunye na mmetụta nke okpomọkụ na njedebe kpo oku, obere okpomọkụ ma ọ bụ nnukwu okpomọkụ dị iche iche nke nwere ike nweta site na semiconductor jụrụ oyi na-ekpebi n'okpuru ọnọdụ nke enweghị ibu na adiabatic.N'ezie, mpempe akwụkwọ jụrụ oyi nke semiconductor enweghị ike ịbụ adiabatic n'ezie ma nwee ibu thermal, ma ọ bụghị ya enweghị isi.
5. Kpebie ọnụ ọgụgụ nke ọkwa nke mpempe akwụkwọ jụrụ oyi.
6. Nkọwa nke mpempe akwụkwọ jụrụ oyi nke semiconductor.
7. Kpebie ọnụ ọgụgụ nke mpempe akwụkwọ jụrụ oyi nke semiconductor.
Nke gara aga: Usoro modul thermoelectric modul okpomọkụ
Osote: Usoro ahaziri TE – oyi
Modul njikwa Tec
Usoro ọkụ ọkụ TEG